C/kariim Guuleed oo ballan qaad u sameeyay musharxiintii la tartantay iyo Ahlu Sunna – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
laba maalmood ka hor M/weynaha maamulka Gal-Mudug loo doortay C/Kariim Xusen Guuleed ayaa waxa uu ka hadlay qaabka ay noqon doonto Xukuumada uu doonaayo in uu soo dhiso maalmaha soo aadan.
C/Kariim Xusen Guuleed ayaa waxa uu sheegay in isaga xukuumada uu soo dhisi doono ay ka mid noqon doonaan maamulka Ahlu Sunna iyo sidoo kale xubno ka mid ah Musharaxiintii la tartameysay isaga.
Dhanka kale M/weyne Guuleed ayaa hadalkaan ka sheegay mar uu xalay Cadaado kaga qeygalayay xaflad isaga lagu taageerayay waxa uuna cadeeyay in maamulkiisa uu noqon doono mid dadka isku keeni doono nabadna dhalin doono.
“Waxaan balan qaadayaa maamulka aan dhisi doono inay kawada qayb qaadan doonaan dhamaan dadka oo dhan dadkii halkaan ku tartamay ee siyaasada u tartamay dhamaantood waa ay kawada qayb qaadan doonaan, sidii aan shalay balan qaaday waxaan soo dhisi doonaa Dowlad wadaag ah oo dadka ka wada qaybgalaan, maanta ugu dambeysay walaalaheena musharaxiinta waan isla joognay waan sheekeysanay.” Ayuu yiri C/kariin Xuseen Guuleed.
Ugu danbeyntii M/weyne Guuleed ayaa sheegay in isaga uusan qorshaha ugu jirin in uu dagaal ku qabsado magaalo madaxda maamulka Goboleedka Gal-Mudug ee Dhuusa-Mareeb oo ay hadda Ahlu Sunna xoog ku heystaan.